कति पौष्टिक हुन्छन् लसुन प्याज ? - Birgunj Sanjalकति पौष्टिक हुन्छन् लसुन प्याज ? - Birgunj Sanjalकति पौष्टिक हुन्छन् लसुन प्याज ? - Birgunj Sanjal
कति पौष्टिक हुन्छन् लसुन प्याज ?
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार ०२:००
एजेन्सी । स्वादका लागि अधिकांश घरको दैनिक खानामा प्याज र लसुन मिसाइएकै हुन्छ । तर के यी खानेकुरा वास्तवमै पौष्टिक हुन्छन् या यो केबल स्वाद बढाउने खाना मात्र हो ?
सबै किसिमका पोषक तत्वहरु प्राप्त गर्न मान्छेहरु विभिन्न रङका फलफृुल र सागसब्जी खाने गर्दछन् । यस्तोमा लसुन र प्याज जस्ता बेरङ्गी खानेकुरालाई धेरैले बेवास्त गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर वास्तवमा यी खानेकुराहरुमा कुनै प्रमुख पोषक तत्व नहुने जस्तो देखिएपनि यिनीहरुमा शरीरका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण तत्वहरु हुने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सेतो देखि रातो लगायत सबै रङ्का प्याजलाई भिटमिन सी, भिटमिन बी६, पोटासियम र फोलेटको राम्रो श्रोत मानिन्छ भने यता लसुनमा पनि अधिक मात्रामा भिटमिन सी, भिटमिन बी६, थाएमिन, पोटासियम, क्याल्सियम, फोस्फोरस, कपर र म्याङ्गानिज पाइन्छ । साथै प्याज र लसुन एकदमै कम क्यालोरी भएको खानेकुरा हुँदा यसले नुन, बटर जसरी अतिरिक्त क्यालोरी नबढाइ हाम्रो खानालाई स्वादिष्ट पारिरहेको हुने क्यालिफोर्निया स्थित डायट विद् जेसिका जोन्स बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो दैनिक खानामा प्याज र लसुन राख्ने गर्नु स्वस्थकर गुणका कारण मात्र राम्रो नभएर भोजनलाई स्वादिष्ट बनाउनमा पनि यसको योगदान हुन्छ । यस्तोमा हामी प्याज लसुन खाइरहँदा स्वादिष्ट खानाका साथै पौष्टिक खाना पनि सेवन गरिरहेका छौँ भनेर उत्साहित र सन्तुष्ट हुन सक्छौँ ।’ प्याज र लसुनका साथै तिनको विरुवाका पनि यति धेरै स्वस्थकर फाइदा छन् कि परम्परागत आयुर्वेदमा तिनलाई औषधिजन्य खाना पनि मान्ने गरिएको छ ।
एलियम फ्यामिलीमा पर्ने यस्ता खानेकुरामा पर्याप्त मात्रामा ‘अर्गानोसल्फर’ युक्त तत्व हुन्छन् जसले कोलेस्ट्रोल र रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सक्ने यसअघिका अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । त्यस्तै यसले गम्भीर अवस्था जस्तै क्यान्सर र मुटु सम्बन्धी रोगबाट पनि जोगाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिन्छ । तर हाम्रो शरीरले सेवन गरिसकेपछि यी खानेकुरामा पाइने यस्ता फाइदाकारी गुणलाई कत्तिको उपयोग गर्छ भन्नेबारे चाहिँ स्पष्ट छैन । किनकी हामीले सेवन गर्नु अगाडि यिनलाई पकाउने गरेका छौँ । यसअघिका केही अध्ययनमा लसुन काँचै खाँदा बढी लाभकारी साबित हुने पत्ता लागेको थियो । त्यसैले कतिपय वैज्ञानिकहरुले इन्जाइम–क्याटलाइज्ड रियाक्सन हुन दिनका लागि पकाउनु अगाडि प्याज र लसुनलाई फुटाएर वा काटेर काँचै अवस्थामा १० मिनेटसम्म राख्न सुझाव दिन्छन् ।
एलियम फ्यामिलीका सागसब्जीमा फाइटोकेमिकल पनि हुने गर्दछन् जसले हाम्रा शारीरिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न सक्छ । अनुसन्धानका अनुसार एलियम सागसब्जीमा हुने फाइटोकेमिकलले हाम्रो प्रतिरोघात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउनुका साथै इन्फ्लामेसन कम गराइ क्यान्सरका जोखिमबाट बचाउन सक्छ । यसैगरी ‘अमेरिकन इन्सटिट्युसन अफ क्यान्सर रिसर्च’ का अनुसार यसले सेल र डिएनएलाई पनि क्षतिबाट बचाउन सक्छ । विशेषगरी यी खानेकुरालाई हाम्रो पेटका लागि राम्रो मानिन्छ । यिनमा प्रिबायोटिक्स हुने हुनाले पनि यसले हाम्रो पेटलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने भनिएको हो । २०१८ मा गरिएको एक विश्लेषणात्मक अनुसन्धानमा प्याज र लसुनमा हुने प्रिबायोटिक फाइबर कतिपय सागब्जी, फलफुल र गेडागुडी भन्दा स्वस्थकर हुने पत्ता लागेको थियो ।
तर अर्कोतर्फ यिनमा उच्च मात्रामा ‘एफओडीएमएपी’ नामक चिनी र फाइबर जस्तै कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ पनि हुने गर्दछ जसकारण कमजोर पाचन प्रणाली भएका मानिसले यसलाई धेरै सेवन गरेमा तिनलाई ग्यास्ट्रिक सम्बन्धि समस्या हुन सक्ने बताइएको छ । यसरी संवेदनशील व्यक्तिहरुलाई प्याज र लसुनको धुलोले पनि असर पार्न सक्छ । यस्तोमा यी समस्या भएका मानिसले प्याजको स्वादमा ओलिभ ओयल सेवन गर्न जोनसले सुझाव दिएकी हुन् । त्यसबाहेक पौष्टिकताका आधारमा प्याज र लसुनको सेवन नगर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण नभएको बताइएको छ । त्यसैले लसुनप्याजले हाम्रो खानाको अनुभव पनि राम्रो गराउने हुँदा हामी कुनै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी नभएको समयमा वा कसैसँग नजिक बस्नु नपर्ने अवस्थामा ढुक्कले सेवन गर्न सकिने उनले बताएकी हुन् । टाइमबाट